Mate - DEBIAN 10 နဲ့ MX-Linux 19 မှာဘာတွေထည့်သွင်းထားသလဲ။ | Linux မှ
MATE - DEBIAN 10 နှင့် MX-Linux 19 တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ထားသနည်း။
အိမ်ထောင်ဖက် အလင်းနှင့်ပြည့်စုံသည် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်အရာနှင့်တူသောအကြောင်း သစ်ကြမ်းပိုးငါတို့များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာခဏပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလေ့မရှိပါ နောက်ဆုံးပို့စ် လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်ကျော်ကဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ သတ်မှတ်သည်။
၎င်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းကိုပြောသောအခါမှသာပြောသောအချက်ကြောင့်သေချာသည် Linux Mint (သို့) Ubuntu MATEကပြောသည်ကတည်းက Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် ဒါဟာကျယ်ပြန့်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်အသုံးပြုသည် GNU / Linux ဖြန့်ဝေမှုများ။ ထို့ကြောင့်၊ ဤစာစောင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးအာရုံစိုက်မည် ဒါဟာဘာလဲ? y သင်မည်သို့တပ်ဆင်မည်နည်း။။ သင်တန်း၏လက်ရှိအလေးပေး DEBIAN GNU / Linux metadistribution၎င်း၏လတ်တလော၌တည်၏ ဗားရှင်း, အ အရေအတွက်အား 10, ကုဒ်နာမည် buster။ ဘယ်လက်ရှိလည်းများအတွက်အခြေခံသည် Distro ပါ MX-Linux 19 (Ugly Duckling).
၎င်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ကိုးကား၍ MATE သည်
"l ကြောင်း Desktop ကိုပတ်ဝန်းကျင်GNOME 2. ကိုအောက်ပါအတိုင်းပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်ရိုးရာ Linux နှင့်အခြား Unix-style operating systems များ၏ရိုးရာ metaphors များကို အသုံးပြု၍ အလိုအလျောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုပေးသည်။ ရိုးရာ desktop အတွေ့အကြုံကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ်နည်းပညာအသစ်များအတွက်အထောက်အပံ့များဖြည့်ဆည်းရန် MATE ကိုတက်ကြွစွာတီထွင်လျက်ရှိသည်။ ” တရားဝင်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်
1 MATE အကြောင်းအားလုံး
1.3.1 Graphic User Interface (GUI) မှတစ်ဆင့် Tasksel command ကိုအသုံးပြုခြင်း
1.3.2 Command Line Interface (CLI) မှတဆင့် Tasksel command ကိုအသုံးပြုခြင်း
1.3.3 CLI မှတစ်ဆင့်အနည်းဆုံးလိုအပ်သော package များတပ်ဆင်ခြင်း
ဒီကနေမီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည့်အရေးအပါဆုံးအကြား Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် အောက်ပါအချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြနိုင်သည်။
အိမ်ထောင်ဖက် နေ့စွဲအပေါ်ဖြန့်ချိခဲ့သည် 19 သြဂုတ်လ 2011 ထိုအမည်သည်သူ၏နာမဖြစ်၏ yerba အိမ်ထောင်ဖက်, တောင်အမေရိက၏အပူပိုင်းဒေသအစိတ်အပိုင်းများမှ Holly ဇာတိတစ်မျိုးစိတ်။
လက်ရှိအဘို့အသွား 1.24 ဗားရှင်း (ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် 1.22 (တည်ငြိမ်သော) ။
အိမ်ထောင်ဖက် ကတဆင့်ရရှိနိုင်ပါသည် တရားဝင် repositories DEBIAN, Mint, Ubuntu နှင့် Fedora စသည့် GNU / Linux Distros များအနက်များစွာရှိသည်။
၏ဇာတိ applications များ၏ဂေဟစနစ် အိမ်ထောင်ဖက် ၎င်းသည်နာမည်များနှင့်မတူသောပရိုဂရမ်များစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် မူရင်း GNOME အစိတ်အပိုင်းများpacket ပconflictsိပက္ခများကိုရှောင်ရှားရန်။ ဥပမာအားဖြင့် Box (File Manager)၊ Pen (Text Editor)၊ Eye of MATE (Image Viewer)၊
အစမှာ အိမ်ထောင်ဖက် သာသဟဇာတဖြစ်ခဲ့သည် GTK + 2။ ဗားရှင်း ၁.၁၂ အရ၎င်းသည်နှစ်ခုလုံးနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည် GTK +2လိုပဲ GTK + 3.
အလွန် ပေါ့ပါးသည် ကောင်းသော applications များနှင့်မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုနှင့်အတူ။
အသွင်အပြင် အစဉ်အလာ ၎င်း၏အသုံးပြုမှုနှင့်လက်ခံမှုလွယ်ကူချောမွေ့။
သဘာဝသဟဇာတ သူတို့နှစ် ဦး စလုံး GTK + ကိုသုံးသောကြောင့် GNOME application များဖြင့်အသုံးပြုသည်။
ဒါဟာများအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ် အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောလူ သူသည် GNU / Linux လောကတွင်အစပြုပြီး / သို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်နိမ့်သောပစ္စည်းကိရိယာများရှိသည်။
၎င်းတွင်ကာတွန်းနှင့်ရုပ်ပုံများ၊ KDE Plasma သို့မဟုတ် Cinnamon ကဲ့သို့သောအခြားပိုမိုအားကောင်းသည့် Desktop Environments နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက။
၎င်း၏စိတ်ကြိုက်အဆင့်ကိုလူအများကစဉ်းစားကြသည် KDE Plasma သို့မဟုတ် Cinnamon တို့ကဲ့သို့သောအခြားပိုမိုအားကောင်းသည့် Desktop Environments နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အခြေခံကျပြီးရိုးရှင်းပါသည်။
ပရိုဂရမ်များနှင့် extension များနည်းပါးလာသည် KDE Plasma သို့မဟုတ် Cinnamon ကဲ့သို့သောပိုမိုအားကောင်းသည့် Desktop Environments များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက GNOME3 application များစွာကိုအသုံးပြုခြင်း၏အားသာချက်ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
မသန်စွမ်း ပိုမိုသိရှိရန် သင်က၎င်း၏သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် နှင့်၎င်း၏ဖန်တီးသူ Distro ၏:
ဘလော့ဂ်၊ တပ်ဆင်ခြင်းလမ်းညွှန်များကိုဘယ်သွားသွား၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်အသုံးပြုသူအသိုင်းအဝိုင်းအခြားအမှုအရာတို့တွင်။ အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ရန်အောက်ပါလင့်ခ်များကိုလည်းရရှိနိုင်သည် အိမ်ထောင်ဖက်:
အမှု၌တ ဦး တည်းလက်ရှိတစ်ခုရှိပါတယ် GNU / Linux DEBIAN 10 ဖြန့်ဖြူးခြင်း (Buster) သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အပေါ်အခြေခံပြီးအခြားသူများ MX-Linux 19 (Ugly Duckling)၊ အများဆုံးအကြံပြုထားတဲ့ installation options တွေက -
Graphic User Interface (GUI) မှတစ်ဆင့် Tasksel command ကိုအသုံးပြုခြင်း
ပြေးပါ Console သို့မဟုတ် Terminal မှ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်
ပြေးပါ command ကိုအမိန့် အောက်ပါ:
အဆုံးသည်အထိဆက်ပြောသည် Tasksel ပဲ့ထိန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (Task Selector) ။
Command Line Interface (CLI) မှတဆင့် Tasksel command ကိုအသုံးပြုခြင်း
ပြေးပါ Console သို့မဟုတ် Terminal ကိုသုံးနိုင်သည် Ctrl + F1 သော့ စူပါအသုံးပြုသူ root session ကိုစတင်ပါ။
ရွေးပါ MATE Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် နှင့်အခြား utility ကိုသို့မဟုတ်အပိုဆောင်း packages များအစုံ။
အဆုံးသည်အထိဆက်ပြောသည် လမ်းညွှန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း de Tasksel (Task Selector) ။
CLI မှတစ်ဆင့်အနည်းဆုံးလိုအပ်သော package များတပ်ဆင်ခြင်း
ပြေးပါ Console သို့မဟုတ် Terminal မှ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် ဒါမှမဟုတ် Ctrl + F1 သော့ နှင့်စူပါအသုံးပြုသူ session ကိုစတင်ပါ အမြစ်။
အဆုံးသည်အထိဆက်ပြောသည် လုပ်ငန်းစဉ် လမ်းပြမြေပုံ Apt Package ကို Installer.
မှတ်စု: အပေါ်မှာအခြေခံပြီး Desktop Environment ကိုလည်း install လုပ်နိုင်ပါတယ် MATE အထုပ်အစားထိုးခြင်းဖြင့်ရိုးရှင်းသောသို့မဟုတ်ပြီးပြည့်စုံ mate အားဖြင့် mate-core o mate-desktop-environment။ ထိုကဲ့သို့သော packages များနှင့်အတူကဖြည့်နိုင်ဖြစ်ခြင်း: mate-desktop-environment-extras y mate-tweak.
လုပ်ဆောင်ချက်များကို Execute Operating System ၏ပိုကောင်းအောင်နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ပြေး command ကိုအမိန့် အောက်ပါ:
ကိုရွေးပြီး Reboot လုပ်ပါ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် အိမ်ထောင်ဖက်တစ် ဦး ထက်ပိုသောရှိခြင်း၏အမှု၌ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် installed နှင့်မရွေးချယ်ဘဲလျက် Login Manager
ပိုမိုသိရှိလိုပါက၏တရားဝင်စာမျက်နှာများကိုကြည့်ရှုပါ ဒေဘီယန် y MX-Linuxဒါမှမဟုတ် DEBIAN အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏လက်စွဲ ၎င်း၏တည်ငြိမ်ဗားရှင်းအွန်လိုင်း.
သတိရပါ၊ ပဉ္စမ post အကြောင်းကိုစီးရီး၏ GNU / Linux Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်များ။ ယခင်သူများအကြောင်းကိုခဲ့ကြသည် GNOME, KDE Plasma, Xfce y သစ်ကြမ်းပိုး. လာမယ့်သူတွေကိုအကြောင်းကိုဖြစ်လိမ့်မည်နေစဉ် LXDE, နောက်ဆုံးတော့ LXQT ။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Entorno de Escritorio» ၏နာမအားဖြင့်လူသိများ «MATE», အရာကဲ့သို့အပေါ့ပါးဆုံးနှင့်အများဆုံးအလုပ်လုပ်တဲ့၏တ ဦး တည်းစဉ်းစားသည် Xfce, ရိုးရာစတိုင်နှင့်ကမ္ဘာ၏အတွင်းရှိဇာတိ applications များကောင်းသောအကွာအဝေးနှင့်အတူ «Distribuciones GNU/Linux»တစ်ခုလုံးအတွက်, အလွန်အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » MATE - DEBIAN 10 နှင့် MX-Linux 19 တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ထားသနည်း။
Linux Post Install ၏ထူးခြားချက်သည်အလွန်ပြည့်စုံသည့်ဆောင်းပါးဖြစ်သည်
LXDE: DEBIAN 10 နဲ့ MX-Linux 19 မှာဘာတွေထည့်ထားသလဲ။
Raspberry Pi 4: စပိန်ကုမ္ပဏီသည် Vulkan ကိုသယ်ဆောင်ရန်အလုပ်လုပ်သည်